Samsung yatanga foni yayo yechipiri yekupeta - iyo Galaxy Z Flip - pana 11 Kukadzi, asi zvakadii nezvekuvandudzwa kune yekutanga Samsung yekupeta foni, iyo Galaxy Fold?
Mhemberero dzave kutanga kuoneka kakawanda nezve chiwedzerwa kune Galaxy Fold - iyo yatinofunga inogona kunzi ingave iyo Galaxy Z Fold kana Galaxy Fold 2. Yakave zvakare yakanzi Project Champ uye Winner 2, saka kune akawanda monikers mukutamba uye panogona kuve nemhando dzakasiyana dzeshanduro. Isu tinotenda iyo Fold 2 ichave ine yemhando nhamba SM-F916.
Hezvino izvo zvatakanzwa nezve iyo Galaxy Fold 2 kusvika parizvino.
Rumored yepakati-gore 2020 kuvhurwa
Mazano aChikunguru kana Nyamavhuvhu kuvhurika, Nyamavhuvhu kuwanikwa
Inogona kunge iri shoma shoma pane yekutanga Fold
The Galaxy Fold yakavhurwa pekutanga paMobile World Congress 2019, asi iyo Fold 2 inotarisirwa kuoneka ikozvino mhuri yeS20 neZ Flip zvatanga, Q2 ichikurudzirwa. Isu takaona misi yaChikunguru yakurudzirwa uye zvakafungidzirwa kuti ichavhura pamwe ne Cherekedza makumi maviri akateerana muna Nyamavhuvhu 2020, nekuwanikwa kubva munaGunyana.
Kana iri yemitengo, gwara remitengo rakakurudzirwa seUS $ 1780-1980, ichitarisa kuti iite shoma pane iyo yekutanga Fold. Pakave zvakare nekutaurwa kweFold e uye Fold Special Edition, yakatemerwa kutenderedza $ 1100, iyo inogona kupa uye yekupinda-chikamu chinopa panzvimbo peiyo premium yatiri kutarisira kubva kuFold 2.
Anouya aine Seni
Isimbi isina simbi, ceramic sarudzo
Inogona kuuya ne brown color color sarudzo
Tiri kutarisira kuti Samsung inamatire kune -bhuku-dhizaini yakatwasuka yakapetwa senge yekutanga Galaxy Fold. Zvichipa dhizaini hombe yeiyi foni-cum-piritsi, panogona kunge paine nzvimbo yekubatanidza iyo S Pen, inonzi inosanganisirwa pane iyi nyowani vhezheni. Kudonha kumwe kwakasvika pakutaura kuti iyo Fold 2 ichave iri Chinyorwa 20 Ultra, isu tiri kufungidzira nekuda kwekumira kwayo uye S Pen kubatanidzwa.
Hapana Galaxy Cherechedzo Ultra modhi, asi iyo Galaxy Fold 2 ichava yako Ultra. #GlazaNote
- Ross Mudiki (@DSCCRoss) Dai 11, 2020
Runyerekupe kubva kuna Max Weinbach zvinoratidza kuti pachave nesimbi isina simbi uye zvedongo vhezheni, isu tiri kufungidzira kuti pachave neakajairika aruminiyamu uye magirazi vhezheni zvakare, kungo chengetedza mutengo uri pasi pekutonga. Inonzi inouya neruvara rwebhuruu, sirivheri, goridhe, pingi uye nhema, kunyangwe isu takaona zvichidonha zvichangopfuura zvichiti zvichauya nemavara matema kana shava. Isu tinofungidzira kuti ichave yendarira kana yendarira pane yakasviba brown.
Nepfungwa yekuti iyo isingafadzi yeiyo yekutanga Galaxy Fold ingatsiviwe nekamera-inoratidza kamera, dhizaini inogona kuve yakachena kupfuura shanduro yazvino.
Kutaura kweiyo yekupinda-level Fold e modhi yakanyora pane yemhando isina chiratidzo chekunze chekudzikisa mutengo.
Display uye zvemahara
Infinity-V 7.7-inch AMOLED kuratidza ne UTG inotarisirwa
4.6-inch AMOLED Yakazara HD + yekuratidzira kwekunze?
Mishumo yekutanga inoratidza kuti iyo Samsung Galaxy Fold 2 inogona kuuya ne8-inch kuratidza; kubva ipapo takaona kutaurwa kwechiratidziro che7.7-inch, ese ari maviri akakura pane yekutanga 7.2-inch. Iko 7.7-inch saizi yakataurwa kakati wandei, pamwe neiyo Infinity-V zita. Iine 120Hz pane iyo Galaxy S20 yakateedzana, zvine musoro kuti kuratidzwa uku kuve 120Hz futi.
Samsung payakatangisa iyo Galaxy Z Flip, imwe yenyaya dzinonakidza yaive yekuti Samsung yakashandisa izvo zvairi kudaidza kuti Ultra Yakaonda Girazi kuchengetedza kuratidzwa. Izvi zvichiri kuchinjika, asi zvinofanirwa kuve zvinopesana nekukuvara pane epurasitiki, kunyange zvichiratidzika kunge zvichiri kufukidzwa neyepurasitiki pamusoro. Zvinoita zvine musoro kuti izvi zvioneke paGolden Fold 2.
Pakave nekutaura kudiki kwechiratidziro chekunze, chimwe chezvakaipa zveiyo yekutanga Fold. Iko zano re 6.4-inch kuratidza iyo inozadza yekunze ichagamuchirwa, ichiwedzera mukushandiswa kweiyi foni kana yakavharwa. Kutaura kweFold e zvinogona kureva kuti pane modhi isina yekunze kuratidza zvakare.
Pamberi pe Hardware pakange pasina kuvuza. Isu taizotarisira kuti Samsung ishandise mureza-giredhi Hardware, pamwe Qualcomm Snapdragon 865 uye chengeta iyi sefoni ye5G. Zviri hazvo kuti iyo Fold 2 ichatanga pa256GB yekuchengetera ne512GB senzira.
Zvakafanana kamera mutoro-kunze seGirazi S20 +
Pasi pekuratidzira kamera yekumberi
Yekutanga Galaxy Fold yaive nemakamera mazhinji, asi zviri pachena kuti Samsung inoda kudzikisa kumberi kamera notch muchiratidziro. Pave paine zano rekuti Samsung ingangoshandisa iri-yekuratidzira kamera pane iyo Fold 2, kana kukundikana iyo, punch hole kamera semhuri yeS20.
A yakavimbika leaker akataura kuti iyo Fold 2 ichave neiyo yakare shure kamera setup sey the Galaxy S20 +. Izvo zvaizoona 12-megapixel main kamera, 64-megapixel 30x zoom kamera uye 12-megapixel Ultra-yakafara kamera, pamwe neDepthVision sensor. Isu takazoona tweak kune aya manhamba, zvichiratidza 16-megapixel Ultra-yakafara kamera panzvimbo.
Yakawedzera Galaxy Fold 2 Leaks:
Kamera - Iyo huru kamera ine katatu kamera kumisikidza ine 12MP / 16MP / 64MP lenses ine mbiri yekuona kwemufananidzo kugadzikana vs. gore rapfuura pa12 / 12 / 16MPs.
- Ross Mudiki (@DSCCRoss) April 27, 2020
Samsung Galaxy Fold 2 runyerekupe: Chii chakaitika kusvika ikozvino?
Hedzino dzese runyerekupekupeya uye hwave kuoneka kusvika parizvino.
12 Chivabvu 2020: Rumors dzinoratidza ruvara rwe brown kune iyo Fold
SamMobile ane Yakataurwa kuti iyo Fold 2 ichave iripo mune dema uye brown mavara.
11 Chivabvu 2020: Mhemberero dzemhando isingadhuri yeGold Fold modhi inoenderera kutenderera
Isu takatanga kunzwa kuti Samsung yaizenge ichitengesa Fold Special Edition pamadhora gumi nemakumi mashanu kubva kuRoss Mudiki, iye zvino Max Weinberg ari kutaura nezve imwe $ 1099 yeFord Fold, inogona zvikuru zvimwe chete izvozvo - nzira yeSamsung yekutengesa zvinhu zvekare kuti ubvise masheya pamberi peFold 2 zororo.
Pane runyerekupe, uye ramba uchifunga kuti ichi runyerekupe, Samsung ichave ichiburitsa Galaxy Fold e ye $ 1100.
Vari kushanda zvakare kusunungura 3 folds. Maviri maviri nemapurasitiki, rimwe riine UTG. Unogona kutsanangura Winner2 vs Champ codenames.
- Max Weinbach (@MaxWinebach) Dai 11, 2020
28 Kubvumbi 2020: Nyowani Samsung Galaxy Fold 2 inodonhedza inopa kamera nyowani uye kuderera kwemitengo
Mamwe maricho abuda kurudzira kuti Fold 2 ichave nemakamera epamusoro kune ayo anogadzirisa, pamwe nemutengo wakatemwa zvishoma.
27 Kubvumbi 2020: Mitengo inokurudzirwa yeGreen Fold nyowani
Kune zvakawanda zvinoyerera zvinouya kubva kuna Ross Mudiki pa Twitter, kusanganisira zano remutengo.
Mutengo - Pakati pe $ 1780 kusvika $ 1980. Sezvo ivo vari kutsvaga kukwidziridza mavhoriyamu, isu tinofunga kuti ichave mutengo unenge madhora zana pasi pegore rapfuura ku $ 100- $ 1880 kunyangwe hombe / kumberi kumberi uye kuratidzwa kukuru, yakakwira resolution kamera, iyo S-Pen uye 1895G.
26 Kurume 2020: Zvidimbu zvitsva zvinoratidza izvo Samsung Galaxy Fold 2 yaigona kutaridzika
Sezvo taona imwe yekufungidzirwa yekushandura, tava neimwe set, ichipa isu zano rekuti Samsung Galaxy Fold 2 ingaratidzika sei.
17 Kukadzi 2020: Mifananidzo yemifungo inotipa pfungwa yezvingaite senge Fold 2
Ben Geskin akavhomora pfungwa mifananidzo yakavakirwa parunyerekupe inotipa mufananidzo wezvaizotarisira kubva kune Samsung Galaxy Fold 2.
Samsung Galaxy Fold 2 - Pfungwa inoenderana nekuvuza
Main Ratidza: 7.7, QXGA + 120Hz AMOLED
Kuvhara Ratidza: 6.4, FHD + Super AMOLED
10MP Selfie Kamera (Kavha + Front)
12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 64MP Telephoto + DepthVision Kamera
- Ben Geskin (@BenGeskin) February 17, 2020
17 Kukadzi 2020: Samsung Galaxy Fold 2 inogona kuratidza pasi-kuratidza kamera
korean masosi akataura iyo Samsung ichave ichishandisa pasi-kuratidza tekinoroji kamera mune inotevera Galaxy Fold 2, nepo yakavimbika Samsung leaker yakapa huwandu hwezvinogona kuitika.
Galaxy Fold 2: yekumberi chivharo ndeye infinity V kuratidza. Huru ndeye gomba punch kana pasi pekuratidzira kamera. Nyowani fomu yeSpen. S20 + kamera setup. Ceramic uye isina stainless simbi. Ndichauya muBlue, sirivheri, Goridhe, Pinki, Nhema.
- Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020
5 Kukadzi 2020: Samsung Galaxy Fold 2 codename yakaratidza saMukundi, inovimbisa zvakananga kutsiva Fold
A kuvuza kunoratidza iyo inotevera Galaxy Fold iri codenamed Winner 2 uye kuti ichava yakananga kutsiva yeGreen Fold.
29 Ndira 2020: Mota mbiri yekuratidzira inowoneka yeGreen Fold 2
Nhamba diki yezvakawanda inodonhedza muhurukuro kubva kuna Ross Mudiki, muvambi weDisplay Search, pa Twitter.
Ultra-yakatetepa girazi (UTG) kubva kuSchott ndiyo tariro yavo yakanaka ipapo. Kutanga paneGirazi Z Flip. Zvino paGreen Fold 2 iyo yava kuzivikanwa seProjekti Champ uye inofanira kuuya pakati-gore. Ichapetwa kusvika ku7.7 ”asi ichave yakanyanya kudhura kupfuura iyo yakawanda inotakurika ma clamshells…
- Ross Mudiki (@DSCCRoss) January 29, 2020
27 Ndira 2020: Samsung Galaxy Fold 2 inogona kuratidza 108MP kamera, 5G uye S Pen rutsigiro, kuvhura muQ2
Nhoroondo pamusoro peiyo Fold 2 yakagovaniswa naMax Weinbach pa Twitter, ichipa imwe yeruzivo rwekutanga nezve Fold update.
Ini ndichangowana izwi rekuti Samsung ingangove iri kutanga iyo yechokwadi Galaxy Fold mutsivi muQ2 yegore rino.
Kana ndakanganisa makomisheni ese akasiyana nenzira kwayo, inofanirwa kunge iine 8 ″ kuratidza, iyo 108MP kamera, yekupedzisira girazi rakatetepa, SPen, Snapdragon 865 uye 5G.
- Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020
6 Zvita 2019: Samsung Galaxy Fold 2 inogona kuuya ne108-megapixel kamera
Bloomberg akati mashoma mashoma emhando yeGPS S20 uye iyo Galaxy Fold - kusanganisira iyo inogona kuva ne-108-megapixel sensor.
18 Gumiguru 2019: Samsung ine chirongwa chitsva chechiso cheGreen Fold 2
Samsung inonzi kuronga kushandisa Ultra yakaonda girazi sekudzivirira kwekupeta mafoni.
6 Gumiguru 2019: Samsung patents inoratidza kupeta foni ne S Pen
LetsGoDigital akafukunura patent Samsung zvine chekuita nekupukuta runhare uye S Peni, zvichiratidza kuti yakagadziridzwa Galaxy Fold inogona kutsigira S Pen, padiki diki sekuziva kutsiva.
26 June June 2019: Wechipiri-gen Samsung inokomberwa kuve neS pen uye 8-inch kuratidza
Chirevo kubva Koreya nhau saiti The Elec, yakakurudzira kuti yechipiri-gen Galaxy Fold inowedzera kutsigirwa kweiyo S pen uye iite yakakura kuratidza.